Dowladaha Soomaaliya & Malaysia oo kawada hadlay Ajnabi ku xiran Muqdisho. | XAL DOON
Home NEWS Dowladaha Soomaaliya & Malaysia oo kawada hadlay Ajnabi ku xiran Muqdisho.
Kuala lumpur: Nin u dhashay dalka Malaysia oo lagu magacaabo Ahmad Mustakim Abdul Hamid, kaas oo hadda ku jira xabsi la sheegay in uu ku soo galay Soomaaliya si uu uga qayb qaato hawlaha kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab, ayaa la soo taagayaa maxkamad caddaalad ah, sida ay sheegtay safaaradda Soomaaliya ee Malaysia.
Madaxa warfaafinta safaaradda Abdimajit M. Osman – oo waraysi telefoon ku siiyay – ayaa sheegay in Ahmad Mustakim lagu soo oogay maxkamadda milateriga ee Soomaaliya, dacwadaha maxkamadduna waxay bilaabmeen 2019 kaddib markii la xiray sanadkaas.
“Axmed si wanaagsan ayaa loola dhaqmaa wuxuuna helayaa xukun cadaalad ah sida uu qabo sharciga iyo nidaamka caddaaladda Soomaaliya. Waxaan jeclaan lahayn inaan u xaqiijinno dadka Malaysia inuu helayo dhageysi cadaalad ah,” ayuu yiri.
Isagoo ka jawaabaya su’aal, Cabdimajit wuxuu sheegay in Ahmad Mustakim uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Malaysia ah oo lagu soo oogo falal la xiriira argagixisanimo iyo taageeridda Al-shabaab ee Soomaaliya.
“Ahmad wuxuu horay xabsi ugu jiray Soomaaliya in ka badan laba sano. Wuxuu sheeganayaa inuu u yimid Soomaaliya si uu u soo booqdo saaxiibkiis oo ay Yemen kula kulmeen iyo inuusan wax xiriir ah la lahayn Al-shabaab,” ayuu yiri Cabdimajit.
Sabtidii, Wasiirka Arrimaha Dibadda Malaysia Datuk Saifuddin Abdullah ayaa la sheegay inuu sheegay in Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay si dhow ula socoto xarigga iyo hannaanka sharciga ee lagu soo rogay Ahmad Mustakim.
Wasiirka ayaa sheegay in mas’uuliyiinta Safaaradda Malaysia ee Khartuum, Sudan, ay tageen qunsuliyad si loo hubiyo daryeelka iyo caafimaadka Ahmad Mustakim.
“Waa inaan ixtiraamnaa shuruucda dalka, waxaana laga yaabaa inaan weyddiisanno wakiillada safaaraddeenna inay ka soo qaybgalaan dacwadiisa maxkamadda,” ayuu yiri Saifuddin.
Cabdimajit ayaa sidoo kale tilmaamay in Ahmad Mustakim oo 34 jir ah lala xiray qof kale oo ajnabi ah, Wuxuu sheegay in Ahmad Mustakim la rumeysan yahay inuu soo galay Soomaaliya qiyaastii 2009kii ama 2010kii.
Cabdimajit wuxuu sharraxay in dowladda Soomaaliya ay labadoodaba ku soo oogtay “inay Al -shabaab ka caawiyeen awooddooda farsamo”.
“(Eedeyntu waxay tahay) waxay gacan ka geysteen abuurista fiidiyowyo dacaayad ah, baraha bulshada iyo in dadka Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta kale ee waddamada shisheeye la baro iyo in la qabtay iyagoo isku dayaya inay si sharci darro ah ugu safraan Yemen halkaas oo lagu eedeeyey inay isku dayeen inay ku biiraan Isis (Daacish) Yemen, ”ayuu yidhi.
“Soomaaliya waa dal muslim ah boqolkiiba boqol argagaxisada ay Al-shabaab ku keentay magaca diinta waa mid ka dhan ah muslimiinta, Malaysia waa dal leh diimo kala duwan oo dadku nabad ku nool yihiin, tani waa islaam dhab ah waana inay tusaale u noqotaa dhammaan muslimiinta, ”ayuu yiri Cabdimajit.
Bishii Agoosto 2014, Bernama waxay sheegtay in Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqa saddex nin oo Soomaali ah oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin kooxda argagixisada Al-Shabaab.
Saddexda nin ayaa la rumeysan yahay inay isticmaalayeen fiisooyinka ardayda si ay dalka u soo galaan.
Al-Shabaab, oo ah garabka ugu halista badan ee Al-Qaacida ee qaaradda Afrika, waxaa lagu aasaasay 2004 Soomaaliya waxaana sidoo kale lagu yaqaanaa weerarrada aadka u sarreeya sida weeraradii 2013 ee lala beegsaday Westgate Mall ee Nairobi ee Kenya iyo dilal badan oo loo geystay siyaasiyiin Soomaaliyeed iyo saraakiisha ciidamada.
In kasta oo Al-Shabaab ay weli khatar amni ku hayso Bariga Afrika oo ay dhaqdhaqaaqyadoodu ku fidayso meel ka baxsan xuduudaha Soomaaliya, haddana kooxda ayaa aad u daciiftay hadda kadib markii la dilay qaar badan oo ka mid ah hoggaamiyeyaashii iyo xubnihii muhiimka ahaa.
Al-Shabaab ayaa ku dishay gudaha iyo dibadda Soomaaliya kumanaan qof oo rayid ah iyo shaqaalihii amniga weeraradii bahalnimada ahaa, waxayna sii wadaa weerarada ka dhanka ah bartilmaameedyada rayidka iyo milatariga ee Soomaaliya inkasta oo dowladda ay ka waddo hawlgallo xooggan labadii sano ee la soo dhaafay.